साहुको ऋण तिर्न र परिवार पालन विदेश जान ठि*क्क परेका बीरेन्द्रलाई बसले गर्दा यस्तो भो (भिडियो हेर्नुहोस) | Public 24Khabar
Home News साहुको ऋण तिर्न र परिवार पालन विदेश जान ठि*क्क परेका बीरेन्द्रलाई बसले...
साहुको ऋण तिर्न र परिवार पालन विदेश जान ठि*क्क परेका बीरेन्द्रलाई बसले गर्दा यस्तो भो (भिडियो हेर्नुहोस)
सकारात्मक सोचले उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले काम गरिहेको छ। युवाले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर युवा उद्यमी मञ्च गठन भएको हो।
स्वदेश वा विदेशमा रहेका युवाको सीप तथा ज्ञान बाँड्ने मञ्चको रूपमा यो गठन भएको हो। मेड इन् नेपाल भन्ने अभियान मञ्चले नै सुरु गरेको हो। नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष मेला पनि आयोजना हुँदै आएको छ। युवा उद्यमी र महिला उद्यमशीलतासम्बन्धी मेला पनि हुँदै आएको छ। उद्यमशीलतालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर नै हामी काम गरिरहेका छौं।
यो संस्थामा कसरी आबद्ध हुन सकिन्छ ? यसमा सहभागी युवा उद्यमीले कस्ता सेवा सुविधा पाउँछन् ?
यो संस्थामा जोडिन १८ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्र हुनुपर्छ। आफ्नै उद्यमशीलता वा व्यवसाय गरिरहेको हुनुपर्छ। चार सयभन्दा धेरै सदस्य छन्। हाम्रो च्याप्टर काठमाडौं, पोखरा, इटहरी, विराटनगर, चितवन, रूपन्देही, कैलालीमा पनि छ। जनकपुर र वीरगन्जमा पनि खोलिएको छ। अब ६ नम्बर प्रदेशमा मात्र एनवाईईएफ पुग्न बाँकी छ। युवा उद्यमीको सीप विकास गर्न विभिन्न तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गरिँदै आएको छ। तीन तहको सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न उद्यमीलाई सहयोग तथा सुझाव प्रदान गरिन्छ। कोभिड–१९ मा युवा उद्यमीको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न प्रकारका अनलाइन सत्रको आयोजना गरियो। कोभिडका कारण घरमा थुनिएर बसेका साथीहरूले कसरी आफ्नो व्यवसायलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने धारणा एकअर्कासँग साट्नु भयो। यस अन्तक्र्रियामा धेरै साथीहरूले सकारात्मक विचार व्यक्त गर्नुभयो। महामारीको समयमा पनि साथीहरूको मनोबल उच्च नै रह्यो।
उद्यमशीलतालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
उद्यमशीलता विकास नभएसम्म मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यसबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले क्षणिक समृद्धि देखिए पनि त्यो दिगो हुँदैन। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सके मुलुक आर्थिक रूपमा सफल हुनेछ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ््नुपर्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रता हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं। अबको गन्तव्य भनेको आर्थिक समृद्धि हो।
Previous articleखै*लाबै*ला म*च्चाउने ओलीको भा’षण, देशभर अर्को हं*गामा, के – के भयो हेर्नुहोस् Pm Kp Oli Speech (भिडियो हेर्नुहोस)
Next articleबिहानै आयो निकै खुशिको खबर चिनले 65 खर्व पठायो औधोगिक पार्कलाइ (भिडियो हेर्नुहोस)